Ndezvipi zvakakonzera shure kwe SEO?
Bhizinesi yemabhizimisi inonyanya kukwikwidzana munzvimbo yepamusoro apo mauto makuru chete ane mbiri yakaisvonaka ane mukana wekukwirira kumusoro paSERP. Zvisinei, munhu wega wega anokwanisawo kurwira kutungamira. Kuti uise purogiramu yako yepamusoro pamakwikwi ekukwikwidza, iwe unoda kugadzira nzvimbo yako nemumwe mupfungwa mupfungwa uye kuigadzirisa maererano nekutsvaga injini dzemitemo. Icho chinonyanya kukosha chekugadzirisa kwekugadzirisa kwekugadzirisa kushandiswa kwekugadzirwa kwekubatana. Livi yekuvakwa inzira yekusika kusiyiswa kwemasangano kubva kune ane kodzero yehutano yakabatana yewebhu. Icho chikamu chekunze-kushanda nzira yekugadzirisa iyo inofanira kuitwa mushure mokunge zvose zvako pa-site zvinhu zvivandudzika. Backlinks inobatsira kukura webhusaiti yekutengesa uye kuwedzera simba rechiremera. Zvisinei, sezvandambotaura kare, kuva mutungamiri mumusika wemasitositeni kunoda nguva yakawanda uye mari. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuva wakagadzirira kuti nzira yekuwana unhu hwakanaka huri kupinda huchava hwakaoma uye hunopedza nguva. Uyezve, unoda kuziva magwero aunogona kuwana zvakanaka shure kweSOO. Muchikamu chino, tichakurukura zvemaoko SEO backlink mitsva iyo inogona kuita kuti chikwata chako chekuvaka chigadziriswe uye inobatsira SEO yako.
Zvinyorwa zvine zvakanaka kumashure ekuchengetera zvivako SEO
Imba yefa SEO backlinks inogadzira inzira yekuwana hukama kune webhusaiti yako kubva kune dzimwe nzvimbo dzakakodzera. Iko mariki yemu digital inoshanda sekuzivikanwa kwekare kunopikisana apo vatori vechikamu vane nhamba huru yevhoti (backlinks) vanowana nzvimbo dzakakwirira. Nzira yebhizimisi yose yeGoogle inobva pakupa vanotsvaga ruzivo rwakanyanya uye rwakakosha. Nzira imwechete yekuita kuti kufarirwa kwehuwandu ndeyekuverenga zvose zvinopinda motokari zvayo zvinogadzira uye nhamba yezvikamu uye unosungira iyo inofanirwa. Somuenzaniso, popular social network Facebook inopfuura 32,348,008,110 backlinks. Iyo mutungamiri wemhedziso paSERP nenhamba yemibvunzo sezvakawanda vashandisi vanovhota semunhu ane kodzero yekushandisa webhu.
Zvisinei, muchokwadi, kana zvasvika kune vashoma vasingazivikanwi uye vakamanikidzika zvakananga ma webbasi, kuwana backlinks kunogona kuva dambudziko. Uyezve, hazvisi zvose zvakagadziriswa zvakasikwa zvakaenzana, uye zvimwe zvacho zvinogona kuunza yako real estate website yakaipa kupfuura zviratidzo zvakanaka. Google yakaisvonaka yakachenjera uye inogona kungosiyanisa pakati pepammy uye mvumo yekupinda. Google bots haingoratidzi kukosha kwezvakagadziriswa apo masangano anoiswa asiwo mukurumbira wewebsite kubva kwavanouya.
Ndicho chikonzero nei muchikamu ichi ndichataura chete nezvevane kodzero dzemabhuti apo iwe unogona kuwana zvakanakira kumashure kune nzvimbo yako yekutengesa.
Chikamu chinokosha chegadziriro iyi inobva pakupa hupfumi hwekukosha kusvika mberi kune vamwe vambani vebhizimisi. Somuenzaniso, unogona kupa kukosha kune vanhu vari pakero yako yeEymail nekuvapa makonti kune zvivako zvemukati zvawakabatana nazvo. Chikamu chekutengeserana pakati pebhizimisi rako rinofanira kusanganisira backlink kuenda kune imwe nzvimbo yekutengesa. Nokuita kudaro, iwe unoita hukama hune humwe hunobatsira pamwe nevamwe vako uye uwane hutano hwakanaka hwejisi kune yako nzvimbo. Vashandi vebhizimisi vako vanogona kusanganisira chinhu chinokosha muchibvumirano chinouya kubva pawebsite inogara munharaunda yako. Izvo zvichabatsira zvikuru nzvimbo yako yeSET SEO.
Ipai zvipupuriro kune imwe dzimba SEO backlinks
Tsvakurudzo yekutsvakurudza yakajeka ichakupa urongwa hwemawebsite ane zvipupuriro kwavari your industry. Yakawanda yehutachiona hwehutachiona hunobatanidza kune munhu akasiya kuongorora. Kana iwe usine peji rakafanana neizvi, ratidza kuti iwe unogadzira mumwe uye unokumbira vanhu kuti vasiye maitiro avo ipapo. Ichakubatsira kuti uwane zvakakosha kumashure uye uwedzere simba rako mumaziso eGoogle Source .